Butterfly Staxx bụ otu n'ime kacha mma mobile ohere mpere online game dabeere na isiokwu nke mara mma ọdịdị na ya kere. Na egwuregwu a, ọ bụ ihe niile banyere yi mara mma okooko osisi na butterflies. The egwuregwu a kwadoro site na ise na-esi anwụde na iri anọ betways-enyere gị aka ka akara mmeri combos. The-esi anwụde na-setịpụrụ megide backdrop nke a omimi osimiri gbara gburugburu ugwu, ahịhịa na osisi. A osisi na-adọrọ mmasị-acha odo odo ifuru buds anya nnọọ mma n'okpuru mbara igwe n'abalị na-egbuke egbuke kpakpando. A mesmerizing ekpere music bụ mgbe niile na-egwuri na ndabere na na ada ụda dị nnọọ kpokọtara. Ịkụ nzọ na egwuregwu a na-amalite na £ 0,20 na kacha atọrọ na a ịgba nke £ 400 a atụ ogho
Nke a ebube themed kacha mma mobile ohere mpere online game e mepụtara site onye ọzọ karịa NetEnt. A aha na-ewu ewu maka online ntụrụndụ site cha cha egwuregwu na-aka egwuregwu merie ewepụ. Ha na-abịa na a ọgaranya ahụmahụ nke fọrọ nke nta iri afọ abụọ na ọrụ a na emewo ka ha nwe nkà nke oghere Ịgba Cha Cha.
E nwere yi akara na nke a kacha mma mobile ohere mpere online egwuregwu na-eme ka ndị na-esi anwụde anya nnukwu. E nwere red, pink na violet okooko osisi na a achasi egbuke egbuke urukurubụba na-akwụ ndị kasị elu ụgwọ ọrụ nke 60x gị nzọ. Ifuru akara kwuo 40x ọ bụla mgbe ise nke ha na akara na-egosi na a payline. I nwekwara ike na-achọpụta na ihe nnọchianya nke na-akpọ kaadị Jack ka Ace. E nwere ihe abụọ ọzọ ifuru akara na-enyere gị aka imeri si bonus atụmatụ. Ha na-a lavender acha ifuru na onye ọzọ na otutu agba nke petals.
Wild Symbol: The ifuru na multicolored petals bụ ọhịa na ọ na-ekpuchi ihe niile na-isi na akara mmanya na ikposa. Ọ na-egosi na niile na-esi anwụde ma na-enyere ị na-eme enwekwukwa n'ịgwa.
Gbasaanụ Symbol: The lavender ifuru akara bụ ikposa atụmatụ a kacha mma mobile ohere mpere online game. Na atọ ma ọ bụ karịa ọdịdị nke ihe oyiyi, i nwere ike imeri ise asaa free atụ ogho. N'oge ndị a spins, i nwere ike na-atụ anya na akwuru na akara na-egosi. Ihe i kwesịrị ịchọ bụ egbuke ndị na ghọọ butterflies na ofufe na-ekpe ọtụtụ ndị na-esi anwụde. Ha anọgide na ha nnyapade ruo mgbe ọgwụgwụ nke niile spins, na-enye gị na-emeri Nchikota payouts na ụzọ ha.
Na a kpokọtara isiokwu na yi ndịna, a kacha mma mobile ohere mpere online game awade iche iche ohere i nwere ike imeri site.
Jackpot Total £190699.31
Jackpot Total £88448.81
Jackpot Total £41816.05
Jackpot Total £27745.31
Jackpot Total £17476.35
Jackpot Total £12373.36
Jackpot Total £11160.85